Izahay dia mamakafaka ny cam cam dash CACAGOO, fitaovana tsara ho an'ny fiaranao | Vaovao momba ny gadget
Fahita matetika ny fampidirana fakan-tsary amin'ny fiara, na amin'ny fijanonana, mba hanampiana antsika hitondra na ho an'ny fiarovana fotsiny. Na eo aza ny fanaparitahana ny lalàna momba an'io Espana io dia tsy misy na inona na inona manakana antsika tsy hanararaotra ireo tombony azo avy amin'ny fananana dash-cam. Androany izahay dia hanolotra anao ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ity karazana vokatra ity, Izahay dia mamakafaka ny cam cam dash CACAGOO, fitaovana tsara ho an'ny fiaranao izay hahagaga anao amin'ny resaka kalitaon'ny sary, ny fahafaha-manolotra atolony antsika ary ambonin'izany rehetra izany amin'ny vidiny. Ka mijanona miaraka aminay ary andao jerena tsara izany.
Avy eo isika dia tsy maintsy manavaka ny endri-javatra isan-karazany izay manolotra antsika hanana hevitra mazava momba ny halavirana azontsika atao amin'ity fakantsary ity ary raha tena mendrika izany.
1 Toetran'ny teknika
2 Fampirimana sy fiasan'ny G-Sensor
3 Ny lozisialy CACAGOO
4 Keypad sy fifandraisana
5 Fitaovana sy kalitaon'ny vokatra
Ny lafiny voalohany izay Voafitaky ny CACAGOO isika dia ny kalitaon'ny sary lehibe atolotra antsika Amin'ny taratasy, ny fanapaha-kevitra ambony indrindra dia 2560 x 1080 amin'ny 30 fps, izany hoe, miaraka amin'ny tahan'ny efijery 21:29, saingy manome sehatra be dia be ho antsika izy ireo:
Ahoana no nahitanao ny famakianao an'ity, raha te hanararaotra ny fahaizan'ny teknolojia HDR izahay dia tsy afaka misafidy afa-tsy ny vahaolana amin'ny FullHD, ny an'ny 1920 x 1080 amin'ny 30 fps miaraka amin'ny tahan'ny 16: 9. Ho an'ny zavatra hafa rehetra, hiondrika amin'ny fikarakarana post mahazatra izay azony atolotra anay izahay.
Raha fintinina, manolotra anay sensor 16 Megapixel sy fandraisam-peo amin'ny endrika .MOV miaraka amin'ny codec H.264. Toy izany koa, mahita mikrô natsangana isika izay mirakitra ny endrika AAC.
Fampirimana sy fiasan'ny G-Sensor
Mba hitahirizana ny atin'ny fakan-tsary dia zava-dehibe ny ahatsiarovantsika fa tsy maintsy mividy karatra microSD isika, satria tsy tafiditra ao anaty fonosana. Izy io dia hanohana karazana karatra microSD na kilasy 6 na avo kokoa, na dia karatra faha-10 aza no atolotra anao raha te hitahiry an'ity karazana atiny mandeha ity. Mikasika ny fahaiza-manao, Tsy hahita fifanarahana amin'ny karatra ambonin'ny 64GB izahayToy izany koa fa tsy dia ilaina loatra ny mampiasa fitehirizana ambonin'izay voalaza, manatsara tsara ny sary izy ary tsy hahita toerana fohy. Indrindra fa ny endrika fandraisam-peo loop dia mihoatra ny optimum.
Ankehitriny dia mandeha amin'ny rindrambaiko izahay, amin'ity karazana fakantsary ity dia tena zava-dehibe ny fandefasana sary ny sary, ary ny tena izy dia ny CACAGOO no manao azy tsara, tokony holazaiko fa gaga be aho. Ity fakantsary ity dia manana ilay antsoin'izy ireo hoe "G-Sensor", fitaovana heverina fa hamantatra rehefa sendra lozam-pifamoivoizana na fifandonana isika, noho izany dia hitahiry ho azy ny atiny voarakitra ao anaty loop mandra-pahatongan'io fotoana io, ary apetraka amin'ny toerana fahatsiarovana izay tsy hisy fiantraikany na hamafana ny ambiny. an'ny firaketana. Amin'izany fomba izany, ny fandraisam-peo azo tamin'ny fahitana ny lozam-pifamoivoizana dia mety ho tena tapa-kevitra rehefa manazava ny helony amin'ny fitakiana iray. Ity G-Sensor ity dia mahatsikaritra ihany koa rehefa mihetsika ny fiara, ka hanomboka handrakitra azy ho azy vantany vao manomboka ianao.
Ny lozisialy CACAGOO
Mikasika ny rindrambaiko, raha vantany vao amboarintsika amin'ny teny Espaniôla, dia mampiasa ny bokotra ananany hivezivezy mora foana amin'ny rafitra iray manontolo izahay. Tsy hanana fisalasalana lehibe momba ny fandidiana izahay, satria ny menio dia aseho amin'ny lisitra iray, toy ny karazana fakantsary hafa misy an'io toetra io. ary ireo mihetsika, izay kosa ho «moana eo no ho eo» sy «SOS» (mitahiry ilay fantsona farany voarakitra an-tsoratra mba tsy hahavery azy io) raha vao manomboka miasa ny fakantsary.
Azontsika atao ihany koa ny manitsy ny masontsivana hafa mora foana toy ny fotoana haharetan'ny loop tsirairay, ny zoro ny sary, ary afaka manatona azy isika Sary 170º, na "mode night" manatsara ny famirapiratana sy ny fifanoherana mba tsy hisy fiantraikany amin'ny rakitsoratra nataontsika ny pitsopitsony fahitana ambany, antsipiriany iray rehefa mampiasa azy amin'ny ankapobeny rehefa mitondra fiara isika, ohatra amin'ny làlambe, izay tsy ahitantsika jiro namboarina amin'ny ankapobeny.
Keypad sy fifandraisana
Ao ambadiky ny fakantsary, araka ny efa nolazainay teo aloha, misy bokotra efatra lehibe, ny iray an'ny «OK», ny iray ho an'ny «Miverina», ary ny bokotra mihetsika. Eo amin'ny ilany ankavanana isika dia hanana ny slot ho an'ny microUSB izay hanome azy hery ampy handoavana azy, ary koa ny bokotra "Reset" izay mamerina ny fikirakirana ny rafitra rehetra, ary ny fivoahan'ny microHDMI hahafahanao mahita ny atin'ny fakantsarinao amin'ny televiziona rehetra raha ilaina izany. Tena antsipiriany ihany ny fampidiran'izy ireo an'io karazana fifandraisana io amin'ny fakantsary misy ireo toetra ireo, indrindra raha tsy manana PC eo an-tànantsika isika.
Amin'ny ilany ankavia hanana ny slot ho an'ny microSD isikaary koa ny bokotra on / off. Raha toa kosa ny tapany ambony dia mihemotra amin'ny hantsana izay hampiasaintsika rehefa "miraikitra" ny fakantsary noho ny tanany azo esorina amin'ny varavarankelin'ny fiara. Ny tena izy dia ny fakan-tsarimihetsika mifikitra tsara amin'ny veran'ny fiara ary hatramin'izao dia milamina sy mahomby ny fampiasana azy, tsy isalasalana fa hijanona amin'ny toerana tsara izy io.
Fitaovana sy kalitaon'ny vokatra
Amin'ny ankapobeny dia tsy manokana fizarana amin'ity fizarana ity aho, fa ny zava-misy dia tsy nandiso fanantenana antsika ny CACAGOO tamin'io lafiny io, na dia vita amin'ny plastika aza, ny fitaovana dia matanjaka sy mahatohitra, raha ny ampahany aloha kosa rivets amin'ny alimo, manome fikitika somary kanto izy io, noho izany tsy hifandona amin'ny fiara izy, na inona na inona faritra misy azy. Ny efijery indray dia IPS ary manana famirapiratana sy fifanoherana tena mahaliana, ankoatry ny horonantsary manakana ny masoandro tsy hanelingelina azy, ka raha ny kalitao sy ny fonosana no tena nahafaly ahy.
Azonao atao ny mahazo ny fakantsary CacaGoo ho an'ny 65.99 ho vidiny tokana noho ity tsikera ity, tolotra izay hidiranao amin'ny alàlan'ity manaraka ity Tsy misy vokatra. ary ao anatin'izany ny kaody PZIG98MB
1 x mpitrandraka suction
1 x Mpanohana fiara
Torolàlana 1 x
Menu lava loatra
Tokony hitondra kaopy fisotroana misolo bebe kokoa aho
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny cam cam dash CACAGOO, fitaovana tsara ho an'ny fiaranao
mihawk dia hoy izy:
Inona no heverin'izy ireo hametrahana "Poo" amin'ny vokatra iray?
Mamaly an'i Mihawk
Ny mpanampy Bixby "manokana" an'ny Samsung Galaxy S8 dia azo ampiasaina amin'ny Samsung hafa